Kitra sy coronavirus: mpilalao sady mpanazatra i Kasaona Roger | NewsMada
Kitra sy coronavirus: mpilalao sady mpanazatra i Kasaona Roger
Mbola tsy afaka am-bavan’ny olona rehetra ny fahafatesan’i Kasaona Roger, voalaza fa matin’ny coronavirus. Olona tena fantatra teo amin’ny sehatry ny fanatanjahantena, indrindra fa ny baolina kitra tao Toamasina, Itompokolahy.
Niaina ary tena nandany ny androny teo amin’io taranja io izy fony fahavelony. Porofon’izany, izy no tale teknika rezionaly (DTR)-n’ny seksiona Toamasina. Vao 17 taona izy dia efa “surclassé”, tao amin’ny klioba 3FB, izay nahatonga azy ho mpiasan’ny fahasalamana tao Toamasina. “Libero” no toerana nisy azy teny ambony kianja. Efa maro ny klioba nilalaovany toa ny Fifafifi ary ny ASF Fortior (Levandana), namaranany ny fiakarana kianja. Tsy niala lavitra ny baolina kitra izy fa nanangana ny La Fureur Club, sokajy vehivavy ary voatendry ho mpanazatran’ny ekipa voafantin’Antsinanana, ka nandrombaka ny ho tompondakan’i Madagasikara. Taorian’izay, nitaiza ireo tanora tao Toamasina ka anisan’ireny i Anderson (Papo), mpilalaon’ny AS Adema, teo aloha sy i Sidoré, tao amin’ny Uscafoot, raha tsy hilaza afa-tsy ireo. Mpilalao baolina kitra ihany koa ny zanany, i Rieul, nandrafitra ny Club M Mananara, niatrika ny “Orange pro league”, teo.
Tsy ny baolina kitra ihany no nahalalana an’i Roger fa teo amin’ny taranja atletisma. Efa tompondakan’i Toamasina, teo amin’ny 100 m fony izy tao amin’ny klioba Ascut. Olona tsotra, mamy hoditra teo amin’ny fiaraha-monina ary tia manampy sy manoro hevitra ireo tanora amin’ny lafiny rehetra. Namela kamboty, telo mianadahy i Kasaona Roger.